Booqashada Netanyahu ee Afrika, SomaliaKenya, Ethiopia iyo Rwanda | shumis.net
Home » News » Booqashada Netanyahu ee Afrika, SomaliaKenya, Ethiopia iyo Rwanda
Booqashada Netanyahu ee Afrika, SomaliaKenya, Ethiopia iyo Rwanda
Ra'iisal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa booqanaya Uganda isagoo soo arki doona meel ku taala Entebbe oo dad lagu afduubay 1976 oo walaalkiis oo hogaaminayay ciidamada gaarka ee Israel uu ku dhintay.
Taalo loogu sameeyay Netanyahu walaalkiis magaalada Entebbe oo ku dhintay hawlgalkii 1976.
Mr Netanyahu, ayaa noqon doona ra'iisalwasaarihii ugu horeeyay ee Israel ee booqda waddamada Afrika ee saxaraha ka hooseeyay tan iyo 1987-dii markii uu ra'iisalwasaare ahaa Yitzhak Shamir.
laakiin, hadda waxaa jira faa'iido labada dhinac, iyadoo waddamada Afrikaanka ay doonayaan inay hormariyaan dhaqaalahooda, iyo xiriirka dhinaca ammaanka ee Israel iyo Israel oo doonaysa inay samaysato saaxiibo cusub ayna hormariso xiriirka gobolka oo mintidiin islaamiyiin ah ay ku kordhayaan.
Waddamada Afrika ayaa arki doona "dacaayada" Netanyahu, sababtoo ah Afrikaanka iyo Falastiiniyiinta ayaa wadaaga taariikh "gumaysi iyo dhulkooda oo la haysto" ayuu u sheegay wakaalada wararka ee AP.
Title: Booqashada Netanyahu ee Afrika, SomaliaKenya, Ethiopia iyo Rwanda